Magacaaga oo ah meeraha - Shaqaalaha Bulshada | Martech Zone
Magacaaga oo ah meeraha - Shaqaalaha Bulshada
Talaado, Nofeembar 5, 2013 Isniin, November 4, 2013 Douglas Karr
Waan faraxnay markaan aragnay Qofwalbo iyo awooda aad ku adeegsan karto shaqaalahaaga si ay kaaga caawiso kordhinta codka shirkadaada laakiin wali waxaan la yaabanahay sida shirkado badan u aamusan yihiin. Waxaan garwaaqsannahay in shaqaalaha qaarkood aysan si fudud isugu xirnayn, laakiin markaan aragno dhowr retweets oo ka imanaya shirkad ay la socdaan boqollaal shaqaale ah, waxaan billaabaynaa inaan isweydiinno waxa kale ee khaldami kara.
In Shaqaalaha Bulshada: Sidee Shirkadaha Waaweyn Ugu Sameeyaan Warbaahinta Bulshada, Suuqgeynta Focus Blue waxay la socotaa daaha gadaashiisa iyada oo leh dhowr magac oo caan ah - sida IBM, AT&T, Dell, Adobe, Southwest Airlines, Cisco, Acxiom, iyo Domo — iyagoo daboolka ka qaadaya sheekooyinka dhiirrigelinta ganacsiga bulshada ee dhiirrigelinaya ee ku dhiirrigeliyay shirkadahaas qarniga 21-aad. Noocyadan hoos u dhaca dhammaantood waxay ku yimaadeen isla garasho isku mid ah: waddada ganacsiga bulshada waxay ku taal iyada oo la xoojinayo shaqaalaha bulshada.
Tag fiiri Shaqaalaha Bulshada bogga degitaanka oo soo qaado cutub muunad ah!